အသုံးပြုသူ FOLDER ကို WINDOWS 10 ကိုအမည်ပြောင်း - WINDOWS ကို - 2019
အသုံးပြုသူတစ်ဦး folder ကို Windows 10 ကိုအမည်ပြောင်းဖို့ဘယ်လို၏မေးခွန်းကို (များသောအားဖြင့်သောကသင်၏ user name ကိုမှသက်ဆိုင်ရာတစ်ဦး folder ကိုရည်ညွှန်းပြီး ကို C: Users (Windows Explorer ကိုကို C ထဲမှာဖော်ပြပါတယ်ဘယ်ဟာ: အသုံးပြုသူများပေမယ့် folder ကိုမှအမှန်တကယ်လမ်းကြောင်းကိုသတ်မှတ်ထားသောထားပြီးသောတစျခုဖွစျသညျ) အတော်လေးမကြာခဏပေးထားသည်။ ဤသည်ကို manual ထိုသို့ပြုသဖြင့်, လိုချင်သောမှဖိုင်တွဲ၏ user name ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်မည်သို့ပြသထားတယ်။ တစ်ခုခုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးလိမ့်မည်ဆိုပါက, ဒီမှာအမည်ပြောင်းဖို့အားလုံးကိုခြေလှမ်းများကိုပြသတဲ့ဗီဒီယိုကရှိသေး၏။
ဒါကြောင့်လိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည်ဘယ်သို့သောအကြောင်းအရာနည်း ဤတွင်ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများရှိပါတယ်: အသုံးအများဆုံးများထဲမှ - Cyrillic ဇာတ်ကောင်များ၏ folder ကိုနာမ၌ရှိနေခြင်း, ဒီ folder ထဲမှာလည်ပတ်ရန်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပသောအစီအစဉ်များအချို့မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပါ; ဒုတိယအသုံးအများဆုံးအကြောင်းပြချက် - ပဲလက်ရှိအမည်အား (သင်တစ်ဦးသည် Microsoft အကောင့်ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါအပြင်, ကအများဆုံးအဆင်ပြေလမ်းလျှော့ချနှင့်မအမြဲနေသည်) ကိုကြိုက်ကြဘူး။
သတိပေးချက်: အထူးသဖြင့်အမှားအယွင်းများနှင့်အတူထုတ်လုပ်အလားအလာ, ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ရပ်များသည်, စနစ်၏ချွတ်ယွင်းရန်သင့်အားအချိန်ကိုပရိုဖိုင်းဒါမှမဟုတ် OS ကိုထဲသို့မဝင်ရဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းကို အသုံးပြု. logged ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားသည်သတင်းစကားတစ်ခုဦးတည်သွားစေလိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်ပဲမဆိုလမ်းထဲမှာကနျြလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်းလိုက်နာကြဘူးသမျှဖိုင်တွဲကိုအမည်ပြောင်းရန်ကြိုးစားပါဘူး။
Windows 10 ကို Pro နဲ့လုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုသူဖိုလ်ဒါအမည်ပြောင်း
အောင်မြင်စွာဒေသခံက Windows 10, နှင့် Microsoft account တစ်ခုအကောင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်ကိုစစ်ဆေးခြင်းအခါဖော်ပြထားနည်းလမ်း။ ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်း - စနစ်သို့အသစ်တခုစီမံအုပ်ချုပ်သူကိုအကောင့် (သင်ဖိုင်တွဲ၏နာမကိုပါပြောင်းလဲစေဘို့မဟုတ်တဦးတည်း) ထည့်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်သစ်တစ်ခု uchetku ဖန်တီးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲအဲဒီလိုနှင့် built-in ဝှက်ထားသောအကောင့်ထည့်သွင်းရန်အဘို့အအလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဒီအလုပျ (Start ကိုပေါ်မှာ right-click နှိပ်. ဆက်စပ် menu ကတဆင့်) အနေနဲ့စီမံခန့်ခွဲသူအဖြစ်တစ်ဦး command prompt ကိုစတင်ရန်နှင့် command ကိုရိုက်ထည့်ရန် ပိုက်ကွန်ကိုအသုံးပြုသူစီမံခန့်ခွဲသူ / တက်ကြွစွာ: ဟုတ်တယ် Enter နှိပ်ပါ (သင်တစ်ဦးရုရှားဘာသာစကားက Windows 10 ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, ဒါမှမဟုတ်သူမတစ်ဦးဘာသာစကားအထုပ်ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် Russified ခဲ့သည်ဆိုပါက, လကျတငျအတွက်အကောင့်အမည်ကိုရိုက်ထည့် - အုပ်ချုပ်ရေးမှူး) ။
နောက်တစ်နေ့ခြေလှမ်း - အသစ်တစ်ခုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအကောင့်ကို select နှင့်ထဲသို့ log (ကရွေးချယ်ရေးတို့အတွက်ပေါ်လာမပါဘူးဆိုရင်, ကွန်ပျူတာကို restart လုပ်ပါ) အား, အဲဒီနောက်သော့ခတ် screen ပေါ်မှာ - (ထွက်ပေါက် Start Menu ထဲမှာအသုံးပြုသူအမည်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ) စနစ်ထဲကရဖို့။ ဘယ်အချိန်မှာသင်ပထမဦးဆုံးမှတ်တမ်းတချို့အချိန်လေ့ကျင့်ရေးစနစ်ကကြာပါတယ်။
Start button ကိုပေါ်မှာ Right-click နှိပ်ပြီး "ကွန်ပျူတာစီမံခန့်ခွဲမှု" menu ကို select လုပ်ပါ။
ကွန်ပျူတာစီမံခန့်ခွဲမှု၌, "ဒေသခံသုံးစွဲသူများ" ကိုရွေးချယ် - "အဖွဲ့ဝင်များ" ။ ထိုအခါလက်ယာဘက်အခြမ်း၌, အရာကိုသင်အမည်ပြောင်းချင်ဖို့ user name ကို folder ကိုကလစ်အမည်ပြောင်းရန် right-click menu မှာကို item ကိုရွေးချယ်ပါ။ နာမသစ်ကိုသတ်မှတ်နှငျ့ "ကွန်ပျူတာစီမံခန့်ခွဲမှု" ကိုပိတ်ပါ။
Users (C: Users) ကို C သို့သွားပါ, Explorer ကို Context Menu က (ဆိုလိုသည်မှာပုံမှန်လမ်း) မှတဆင့်အသုံးပြုသူ folder ကိုအမည်ပြောင်း။
စာနယ်ဇင်းပြေး box ထဲမှာသင့်ရဲ့ကီးဘုတ်နဲ့အမျိုးအစား regedit လို့အပေါ်ဦးဝင်း + R ကို "OK ကို" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ Registry Editor ကိုဖွင့်ပါ။
Registry Editor ကိုခုနှစ်, အပိုင်း navigate မိုက်ကရိုဆော့ဖ Windows NT CurrentVersion ProfileList HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE နှင့်သင့် user name ကို (လက်ျာဘက်၌ပေါ်နှင့်အောက်ပါပုံရိပ်အပေါ်တန်ဖိုးအနေဖြင့်နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါသည်) မှကိုက်ညီသော subkey ရှာပါ။
သို့သော်လည်း parameter ကို Double-click နှိပ်ပြီး ProfileImagePath နှင့်ဖိုင်တွဲအသစ်ကိုနာမတော်ကိုတန်ဖိုးပြောင်းလဲသွား။
Registry Editor ကိုပိတ်လိုက်ပါ, ထိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအကောင့်ကို exit နှင့်သင့်ပုံမှန်အတိုင်းအသုံးပြုသူအကောင့် log in - အသုံးပြုသူအမည်ပြောင်း folder ကိုအပြစ်ကင်းစင်စွာအလုပ်လုပ်သင့်ပါတယ်။ သည်ယခင်က activated အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအကောင့်ကို turn off command ကို run ဖို့ ပိုက်ကွန်ကိုအသုံးပြုသူစီမံခန့်ခွဲသူ / တက်ကြွစွာ: အဘယ်သူမျှမ အဆိုပါ command prompt ကိုမှာ။
Windows 10 ကိုနေအိမ်ထဲတွင်ဖိုင်တွဲ၏ user name ကိုပြောင်းပေးဖို့ကိုဘယ်လို
အထက်ပါနည်းလမ်းက Windows 10 ဦး၏အိမျဗားရှင်းများအတွက်သင့်လျော်သည်မဟုတ်, ပင်ကဒီမှာအသုံးပြုသူတစ်ဖိုင်တွဲကိုအမည်ပြောင်းရန်လမ်းလည်းမရှိ။ သမ္မာတရားကိုငါတကယ်ကအကြံပြုကြဘူးဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက်: ဤနည်းလမ်းကိုလုံးဝစင်ကြယ်သော system ပေါ်တွင်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူကို install အစီအစဉ်များပြဿနာအလုပ်လုပ်နှင့်အတူအချို့သောကိစ္စများတွင်၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုအပြီးပေါ်ထွန်းစေနိုင်သည်။
ဒါကြောင့် Windows 10 ကိုအိမ်မှာအသုံးပြုသူတစ်ဖိုင်တွဲကိုအမည်ပြောင်းရန်ဤအဆင့်များအတိုင်းဆောင်ရွက်:
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့, အုပ်ချုပ်သူအကောင့် Create တစ်ခုသို့မဟုတ် built-in ကိုသက်ဝင်။ သင့်လက်ရှိအကောင့်ထဲက Get နှင့်အသစ်သောစီမံခန့်ခွဲသူအကောင့်အဖြစ် log ။
(စပယ်ယာသို့မဟုတ် command line ကနေတဆင့်) အသုံးပြုသူ folder ကိုအမည်ပြောင်း။
ဒါ့အပြင်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့, parameter သည်တန်ဖိုးတစ်ခုကိုပြောင်းလဲ ProfileImagePath registry ကို key မှာ မိုက်ကရိုဆော့ဖ Windows NT CurrentVersion ProfileList HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE သစ်တစ်ခု (သင့်အကောင့်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းအတွက်) ။
ဟာ Registry Editor ထဲမှာ, (ထိပ်မှာလက်ဝဲဘက်မှာကကွန်ပျူတာ,) ကိုအမြစ် folder ကို select လုပ်ပါ, ထို့နောက် Edit ကို select လုပ်ပါ - ထိုကို C ရှာရန်နှင့်ရှာဖွေ: အသုံးပြုသူများ Staroe_imya_papki
သင်တဲ့အခါ, သစ်တစ်ခုနှင့်စာနယ်ဇင်း Edit ကိုကပြောင်းလဲပစ် - registry ကိုအတွက်သောအရပ်တို့ကိုမရှာတွေ့ Next ကို (သို့မဟုတ် F3) ကိုရှာပါ, ဟောင်းလမ်းပြလေ၏။
ပြီးစီးပေါ်၌ Registry Editor ကိုပိတ်ပါ။
ဤအရာအလုံးစုံခြေလှမ်းများ၏ပြီးစီးအပေါ်သို့ - သင်အသုံးပြုအကောင့်ထဲက get သင်ဖိုင်တွဲအမည်ပြောင်းလဲသွားရသောအဘို့အအသုံးပြုသူအကောင့် navigate ။ အရာအားလုံးချောချောမွေ့မွေ့အလုပ်လုပ်ရမယ် (သို့သော်ဤကိစ္စတွင်အတွက်ခြွင်းချက်ရှိဖြစ်နိုင်သည်) ။
ဗီဒီယိုကို - အသုံးပြုသူတစ်ဖိုင်တွဲကိုအမည်ပြောင်းဖို့ဘယ်လို
နှင့်သင့် Windows ကိုအသုံးပြုသူ folder ကို 10 ၏နာမတော်ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်အပေါငျးတို့သခြေလှမ်းများကိုပြသပေးသောနောက်ဆုံးတော့ဂတိတော်ရှိသည်အတိုင်း, တစ်ဦးကဗီဒီယိုကြေညာချက်။